Amathrendi Omshado Ka-2021 Udinga Ukwazi - Ukuhlela Nezeluleko
Amathrendi Omshado Ka-2021 Odinga Ukwazi
Wedding Trends 2021 That You Need Know
Hambisa imishado emikhulu, enonile yaseNdiya. Imishado emincane, esondelene ilapha ukuhlala. Unyaka we-2020 ukhombise ukuphazamisa okukhulu kwazo zonke izinto ezijwayelekile, futhi imboni yomshado ayizange ihluke ngokuhlukile kuwo wonke umuntu. Imishado emikhulu ebihlelelwe phambilini noma yesabelomali bekufanele ihlehliswe noma ikhanselwe noma ihambele phambili ngenxa yokuqubuka kwe-COVID-19.
U-2021 uthembisa ukwehluka - wonke umuntu uphakamise iminwe - futhi imboni yomshado ilungiselela izinto ezizothatha unyaka omusha, kanti imigomo iqala ukukhishwa kwayo futhi abantu bafuna ukubuyela esimeni esejwayelekile ngangokunokwenzeka. “Amaphathi omshado ahlela ukwenza imikhosi ngokuhambisana nokwejwayelekile okusha ngomoya ogcwele. Ngenxa yesimo sakamuva nje, imishado iyashintshwa ukuze ihambisane nemigomo emisha futhi nakhu ukuthambekela esikubona emishadweni yango-2021, ”kusho uRoop Pratap Choudhary, onguMqondisi Omkhulu, uNoor Mahal, eKarnal. Nakhu kubheka izitayela zomshado zango-2021.
Uyakhumbula ukubona izithombe zomshado wabazali bakho noma ogogo nomkhulu bakho lapho kwakunezivakashi ezimbalwa futhi kungenziwa imikhosi emikhulu kangaka? Lokho kuyinto ejwayelekile emishadweni. “Izithandani zikhetha imikhosi yesintu futhi zigubha amasiko azo. Babheke ukuchitha isikhathi sekhwalithi nabathandekayo nabathandekayo, besebenzisa izindlela zokuqamba nezindlela zokwenza amasu ukwenza lokhu kwenzeke, ”kwazisa uChoudhary.
Yize imishado isiya ngokuncipha, imibhangqwana isabheke ukugubha imicimbi eyahlukahlukene. Lokho, nokuqinisekisa imihlahlandlela yokwehlukaniswa kwezenhlalo nezinombolo ezivinjiwe kunikeze imikhosi emikhulu engena esikhundleni semigubho emincane ebanjelwe ezigidini ezahlukahlukene zezivakashi. UChoudhary uthi, 'Ukwamukela uhlu olude lwezivakashi, imibhangqwana yenza imicimbi eminingi yamasiko nemikhosi emincane evumela abaseduze nabathandekayo ukuba babe yingxenye yosuku lwabo olukhethekile.'
Izabelomali Zokudla Nemihlobiso
Njengoba imicimbi iye iba mincane, futhi njengoba uhlu lwezivakashi, imali idluliselwa kwezinye izici zomshado, njengokudla nokuhlobisa, manje esenyuse isabelomali. 'Imishado emincane izovumela imibhangqwana ukuba izame kakhudlwana ngokukhanyisa, isimo sendawo, imihlobiso nokudla, kuvuleke indlela yemikhosi esabekayo,' kusho uChoudhary. I-Knot Worldwide, indawo yezimakethe zemishado iveza ukuthi imishado esondelene nabantu “ibaluleke kakhulu kwezakudala mandap . Sabalalisa izihlalo ezungeze i- mandap , izihlalo phansi, kwakheka 'amabhamuza okuhlala' njengezihlalo ezibekelwe izihambeli, izihlalo ezincane zokuhlala kwamatende kuyo yonke indawo ”yilokho okuzoba yinto evamile kulo nyaka.
Imishado Yendawo: #VocalForLocal
Ngenkathi imishado yangaphambilini eya phesheya ibifunwa kakhulu, isimo esikhona manje - nekusasa elingenasiqiniseko lokukhululeka kwezokuvakasha kwamazwe omhlaba - kudale ukuthi abantu ababheke ezweni bafune indawo abangayilungela ngezinhloso zabo. Njengoba i-India iyizwe lezinhlobonhlobo ezinkulu - kusuka eziqongweni zezintaba kuya ezinhlangothini zasolwandle - kuningi ongakhetha kukho! UChoudhary uthi, “Iqembu elisondelene lomndeni nabangane elibungaza ndawonye endaweni ebukekayo eseduze kwendalo yilona elikhethwayo. Lokhu kuzonciphisa ukuhamba nokubuya kuyo yonke imicimbi futhi kunikeze ithuba lokwakha okuhlangenwe nakho okunenjongo endaweni ephephile. ”
Isikhathi okuwukuphela kwaso - kulesi simo esibangelwe ubhadane njengamanje - esingcono ngaphandle, sezindawo zomshado. Esikhundleni sezikhala ezivaliwe ezinesiphephetha-moya, abantu bazokhetha indawo evulekile engaphandle enendawo entofontofo uma kubhekwa ubukhulu bemibuthano “Imibhangqwana ikhetha imikhosi emihle ebanjelwa ngaphansi kwesibhakabhaka endaweni evulekile yamahhala lapho izivakashi zizizwa zikhululekile khona,” amaphuzu aphume Choudhary. Ubuye futhi athi, 'Imibhangqwana ikhetha izindawo zokungenisa izihambi ezihlome ngokuphelele futhi ezizibophezele kwimikhombandlela yenhlanzeko nokuphepha.'
Yize lokhu kungewona umkhuba ohlobene ne-COVID, ukusimama emishadweni kubonile ukukhuphuka kule minyaka edlule. 'Kungaba ukukhetha indawo yomshado eqaphela imvelo ukunciphisa ukusetshenziswa kwepulasitiki ekupakisheni izipho nokunye nokunikeza izitshalo njengezipho ezivakashini ekunciphiseni ukumoshwa kokudla, imibhangqwana iyaqinisekisa ukuthi imikhosi yabo ihlanzekile futhi inesibopho,' kwazisa uChoudhury. Esinye isici esidlala indima enkulu ngemuva kwalolu bhubhane, ukusimama. Ngabantu abakwazisa abanakho kakade futhi bekhuthaza izinhlangothi zabo zokudala, amaphrojekthi we-DIY enze uphawu lwawo ngemibhangqwana ebakhethela ngokwengeziwe. I-Knot Worldwide iveza ukuthi izinto zokuhlobisa ezisimeme njengamabhasikidi kamoba, amalambu kamoba, izitshalo nezimbali namabhodwe obumba athola indawo ebuhleni bomshado ngisho nasemibuthanweni emincane esondelene kakhulu ekhaya.
Funda futhi: Bheka Ukuthi Imishado YamaNdiya Ishintsha Kanjani Ngezikhathi
iziqongo kumajini amhlophe
uhlu lwamafilimu e-hollywood ka-2017 othando
ukuzivocavoca ngebhola lokuzivocavoca
izitayela zezinwele zamantombazane ezinobuso obu-oval
izinzuzo zokudla ama-alimondi afakwe emanzini